एमयू विवादबारे कसले के भने ? – Sajha Bisaunee
एमयू विवादबारे कसले के भने ?
सीता वली । १ माघ २०७७, बिहीबार ०६:०३ मा प्रकाशित
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) केही दिनयता तनावग्रस्त छ । एमयूमा स्थापनाकालदेखि नै विश्वविद्यालय प्रशासन, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूबीच विवाद रहँदै आएको छ । पटक–पटकको आन्दोलन र तालाबन्दीले थला परेको एमयूमा केही दिनयता पुनः विवाद सुरू भएको छ । उत्पन्न विवादले झडपको रूप समेत लिइसकेको छ । मौका परीक्षाको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी र विश्वविद्यालय प्रशासनबीच असमझदारी देखिएको हो । प्राध्यापकहरूका संगठनले समेत विद्यार्थीको आन्दोलनमा समर्थन जनाएपछि विश्वविद्यालय प्रशासन तथा उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह यतिबेला अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उपकुलपति सिंहले आफू शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लागेको भन्दै विद्यार्थीका माग नाजायज भएको बताउँदै आएका छन् भने प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू उपकुलपतिले विश्वविद्यालय ऐन–नियमविपरीत मनोमानी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्राज्ञिक थलोमा किन सधैंजसो अशान्ति ? बारम्बार विवाद र झडपको अवस्था किन ? विद्यार्थीका मागप्रति उपकुलपतिको धारणा के छ ? विद्यार्थीको आन्दोलनमा प्राध्यापकहरूको ऐक्यबद्धता किन ? विवादको समाधान के ? लगायतका विषयमा हाम्रा सहकर्मी सीता वलीले एमयूका उपकुलपति, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूसँग गरेको संवादको सम्पादित अंशः
नाजायज मागमा सम्झौता हुँदैन
मैले विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीसँगै गुणस्तर सुधारका लागि काम गरिरहेको छु । विद्यार्थीहरू नाजायज माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । हिजो विश्वविद्यालयलाई दुहुनो गाइ बनाएर खानेहरूले नै आज राजनीतिक चलखेल गर्दैछन् । उनीहरूकै उक्साहटमा विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । इन्जिनियरिङ्ग संकायको चार वर्षे अवधिमा आठौं सेमेष्टरमा विद्यार्थीले ४० वटा विषय अध्ययन गर्नुपर्छ । जसमा ३२ वटासम्म विषय लागेका विद्यार्थीहरू यो आन्दोलनमा सहभागी छन् । निरन्तर अध्ययनमा लागेका र अनुशासित विद्यार्थी उनीहरूको आन्दोलनमा छैनन् ।
अर्को कुरा विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट मात्रै बाँड्ने थलो मात्र होइन । यही अवस्थामा हामीहरू अगाडि बढ्यौं भने भोलि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर कहाँ पुग्छ ? हामीमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । भोलि यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू बजारमा नबिक्न सक्छन् । त्यसैले मैले नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा नै एमयूका विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकून र अब्बल बनुन् भनेरै शैक्षिक गुणस्तर सुधारको काम थालेको छु । म शैक्षिक सुधारका सवालमा जुनसुकै अवस्थामा पनि सम्झौता गर्दिन ।
थुप्रै कदम चाल्न बाँकी
हरेक कामको आफ्नै प्रक्रिया छ । ज्ञापन–पत्र बुझाउने पनि विधि प्रक्रिया होला नि ? संकाय प्रमुख, परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुख, क्याम्पस प्रमुखलगायत धेरै निकाय विश्वविद्यालयमा छन् । सिधै उपकुलपतिले नै ज्ञापन–पत्र बुझिदिनुपर्ने ! मैले विद्यार्थीहरू मकहाँ आउँदा पनि बारम्बार भनेको हो– परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुखकोमा जानुहोस् । मैले विद्यार्थीलाई चार पटकसम्म फर्काएको छु ।
विश्वका कुनै पनि विद्यालयमा यस्तो अभ्यास छैन कि बारम्बार मौका परीक्षा होस् । हामीले आठ वटा सेमेष्टरमा चार पटकसम्म त मौका परीक्षा दिने व्यवस्था गरेकै छौं । त्यति गर्दा पनि पास नहुने केही विद्यार्थी भोलि कस्तो इन्जिनियर भएर बजारमा बिक्छ ? मैले विद्यार्थीहरूलाई थप आन्दोलित हुनेगरी कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन । माग सरासर गलत र गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठ्ने खालका छन् । त्यसैले कुनै पनि हालतमा यसमा मेरो सम्झौता हुँदैन । यो मात्रै होइन विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि मैले थुप्रै कदम चाल्न बाँकी छ ।
यहाँ कुनै सोझो किसानको इमान्दार छोराछोरी आन्दोलनमा छैन । राजनीतिक आडमा, भ्रष्टाचार गर्न नपाएर र निजी कलेजको संरक्षणमा हिजोदेखि नै आन्दोलन गरिरहने एउटै ग्रुप छ । हिजोका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले बसालेको थितिले गर्दा नै आज यो अवस्था निम्तिएको हो । हिजो के भयो म जाँन्दिन । तर, भोलि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय भ्रष्टाचारमुक्त, गुणस्तर र विश्व शैक्षिक बजारमा बिक्ने खालका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने थलो बन्नेछ । म यही लक्ष्य र उद्देश्यका साथ काम गर्न चाहन्छु । अहिलेको आन्दोलन राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित छ । विद्यार्थी र अभिभावकले यसलाई बुझ्नुपर्छ । यो योजनाबद्ध तरिकाले लागेको समूह हो । निजी कलेजको रसपानीमा केही विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेका छन् । हामीहरूले विद्यार्थीका जायज माग नसुन्ने भनेकै छैनौं । तर प्रक्रियागत तरिकाले आउनुपर्छ भन्ने हो । यस्तै प्रवृत्ति दोहोरीराखे एमयूलाई कसैले विश्वास नगर्ने वातावरण बन्न सक्छ । हाम्रो चिन्ता यसमै हो ।
– उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह
गल्ती–कमजोरी सुधार्दै जाउँ
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा विगतदेखि नै आन्दोलन भइरहन्छन् । यसको दोष कसलाई दिनुहुन्छ ? यसको दोषी एउटा पक्ष मात्र नभइ हामी सबै हौं । विश्वविद्यालय हुर्किने चरणमा छ । सिकाइकै चरणमा रहेका बेला गरिने अस्वाभाविक गतिविधिले विश्वविद्यालयलाई पक्कै राम्रो गर्दैन । यस्तो भइरहनुमा हामी प्राध्यापक, विद्यार्थी, प्रशासन सबैको दोष हुन पनि सक्छ । तर, हिजो जे गर्दै आएका थियौं आज पनि त्यही गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो विचार होइन । विगतका गल्ती–कमजोरी सुधार्दै परिवर्तन भएर नयाँ गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
विश्वविद्यालय भनेपछि एउटा प्रदेश र देशको मात्रै होइन । त्यसैले यहाँको उत्पादन विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्छ । हाम्रा उपकुलपतिज्यूले पनि विश्वविद्यालयलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन खोज्नुभएको छ । यसमा हाम्रो समर्थन र सहयोग रहन्छ नै । तर हिजोदेखि एउटा अभ्यास गर्दै आएका विद्यार्थी, प्रशासनका कर्मचारी र प्राध्यापकहरूलाई एकैचोटि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन खोज्दा असजिलो पक्कै भएको छ । हिजोका गलत गतिविधिलाई प्रशासन, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले सुधार गर्दै जानुपर्छ । आजभोलि विश्वविद्यालयमा भइरहेको आन्दोलनले विद्यार्थीलाई तत्कालका लागि न्याय त होला । तर, इन्जिनियरिङ्ग जस्तो प्राविधिक विषयमा प्रत्येक सेमेष्टरमा फेल भइ मौका परीक्षा माग्ने प्रचलन कुनै विश्वविद्यालयमा छैन । यसो गरिनु राम्रो पनि होइन । भोलि यस विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका इन्जिनियर बजारमा बिक्ने कि नबिक्ने ? हिजोका दिनमा जे भए पनि अब विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न जरुरी छ ।
– भीम रोकाय, प्राध्यापक
संवाद र सहकार्य जरुरी
विश्वविद्यालय विधि र एउटा लयमा हिँड्नुपर्छ । सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा विश्वविद्यालय चल्नुपर्छ भन्ने नै विद्यार्थीहरूको माग होला । उपकूलपतिज्यूले नयाँ ढङ्गले विश्वविद्यालयलाई अगाडि लैजान खोज्नुभएको छ । त्यो एकदमै राम्रो पक्ष पनि हो । तर, अचानक काम गर्न खोज्दा असजिलो हुँदो रहेछ । विद्यार्थीरूको आन्दोलन जायज र नाजायजभन्दा पनि मौका परीक्षा कति पटकसम्म लिने भन्ने विषयमा वार्ता र संवादबाट टुङ्ग्याउन जरुरी छ । नेपालकै सन्दर्भमा काठमाडौंको पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसमा मौका परीक्षा लिने अभ्यास छ । तर, बारम्बार मौका परीक्षा लिँदा गुणस्तरीयताको पनि प्रश्न उठ्छ ।
– चित्रबहादुर के.सी. (केन्द्रीय सदस्य)
नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन तथा मप विश्वविद्यालय समितिका अध्यक्ष
मौका परीक्षाले गुणस्तर घटाउँदैन
अन्य संकायमा भन्दा इन्जिनियरिङ्ग संकायका विषयहरू अप्ठ्यारा हुने भएकोले हामीहरूले मौका परीक्षाको माग राखेका हौं । त्यो अभ्यास मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा हिजो पनि थियो । हिजोदेखि नै विद्यार्थीहरूले मौका परीक्षा दिन पाइन्छ भनेर केही विषयको निरन्तर परीक्षा दिने र कतिपय विषय मौका कुरेर दिने गर्दै आएका छन् । मौका परीक्षाले शैक्षिक गुणस्तर घटाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । बरू गुणस्तर बढाउनमा मद्दत गर्छ । हामीहरू अझै पनि सहमतिमा जानुपर्छ भन्नेमा छौं । पहिलेदेखि गर्दै आएको अभ्यास एक्कासी नगर्ने भनेपछि असहज भएको हो । यसलाई विस्तारै हटाए पनि मौका परीक्षा तत्कालका लागि भने हटाउनु हुँदैन ।
– टोपेन्द्रप्रसाद पौडेल (राज), विद्यार्थी
मप विश्वविद्यालय सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग